करोडौंको सपिङ कम्प्लेक्स समेत शौचालयविहिन
सुरक्षा गार्ड नै दिसा पिसाव गर्न झाडीमा
झापा, ८ चैत । झापा जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम झापा बजारमा रहेको एक मात्र बहुउद्धेश्यीय सपिङ कम्प्लेक्स समेत चर्पीविहिन छ । राजु अग्रवालले बनाएको सपिङ कम्प्लेक्समा आउने ग्राहकका लागि एक एउटा पनि चर्पी छैन । कम्प्लेक्समा रहेको बैंकका गार्ड समेत दिसा पिसाव गर्नका लागि नजिकैको झाडीमा पुग्छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साह र उपाध्यक्ष कुन्ती बूढाथोकीले समेत ५२ सटर भएको सपिङ कम्प्लेक्समा चर्पी नभएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे । “हामीले यतातर्फ सोचेकै थिएनौं”, उपाध्यक्ष बूढाथोकीले भनिन्, “यहाँ आउने ग्राहकलाई पुग्नेगरी चर्पी बनाउन लगाउनुपर्छ ।”
यही कम्प्लेक्समा क वर्गको बैंकको शाखा कार्यालय समेत राखिएको छ । यसैगरी मनी ट्रान्सफर र अन्य पसलहरु समेत रहेका छन् । “हामी पनि बाहिरै जाने हो हजूर”, बैंकका गार्डहरुले जिल्लाको सरसफाइ अनुगमन टोलीलाई सलाम ठोक्दै भने, “बैंकका सरहरुका लागि भित्र एउटा चर्पी छ, अरु कसैका लागि छैन।”
सपिङ कम्प्लेक्सको पछाडि सेप्टिक ट्यांकको लागि खाडल तयार गरिदैछ, तर चर्पी बनिसकेको छैन । सपिङ कम्प्लेक्समा रहेका भ¥याङनेरको खाली भाग फोहर जम्मा गर्ने ‘कलेक्सन सेण्टर’मा बदलिएको छ । “अगाडिको फोहरले हामीलाई पनि गिज्याउँछ”, बैंकका गार्ड भन्छन् ।
वाचामा चुक्यो अभियानकर्ताको टोली
चर्पी नभएको घरमा पानी पनि नपिउने वाचा गरेको टोली झापा गाउँपालिकामा पुगेपछि आफ्नो वाचामा चुकेको छ । जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख, जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख लगायतको टोली झापा जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम कुमरखोदस्थित झापा गाउँपालिकामा सरसफाइ प्रवद्र्धन अनुगमनमा पुगेपछि कुनै पनि चिया नास्ता पसलमा चर्पी भेटेन । अन्ततः चर्पी नभएकै घरधनीले निर्माण गरेको सटरमा रहेको खाजा पसलमा टोलीले विहानको खाजा खायो ।
“यो आजका लागि हाम्रो विशेष वाध्यता थियो”, टोलीका सदस्य महेन्द्र कार्कीले भने, “यहाँ हामीले जिल्लाको तर्फबाट विशेष अभियान सञ्चालन गर्न सकिएको थिएन । त्यसैले आज चर्पी नभएको घरधनीले बनाएको चर्पी नभएको सटरमा सञ्चालन गरेको खाजा पसलमा खाजा खानुप¥यो ।” “आज हामी जीवन र मरणको वाध्यतामा परेका छौं । यहाँ नखाऔं भने जीवनको सवाल छ, खाऔं भने प्रतिवद्धता पूरा हुँदैन”, अभियान टोलीका सदस्य किसन गौतमले भने, “त्यसैले आजका लागि चर्पी नभएको घरधनीले बनाएको चर्पी नभएको चिया नास्ता पसलमा खाजा खाए पनि अरु दिन हामीले यस्ता पसलमा चिया नास्ता खाने त के, त्यहाँ बस्न पनि बस्दैनौं ।”
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेल, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठ, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापाका सरसफाइ फोकल पर्सन रुद्रबहादुर न्यौपाने, सरसफाइ अभियानका कार्यक्रम संयोजकहरु महेन्द्र कार्की र किसन गौतम, विकास सञ्चारकर्मी रोहित काफ्ले लगायतको टोलीले चर्पी नभएको घरमा खाजा खाए पनि त्यत्तिकै भने हिडेन । “हामीले सटर बनाएर भाडामा लगाउने घरधनीलाई एक हप्ताभित्र सटरमा आउने ग्राहकले समेत प्रयोग गर्न पुग्नेगरी चर्पी बनाउन निर्देशन दिएका छौं, यसको अनुगमन स्थानीय सरसफाइ सहजकर्ता र वडा अध्यक्षले गर्नुहुन्छ”, प्रमुख पोर्तेलले भने, “जिल्लाको ध्यान पुग्न नसकेकै कारण सिंगो बजारमा रहेका चिया नास्तापसलहरुमा कहीं पनि चर्पी भेटिएन ।”
विहान सात बजे झापा जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम झापा बजार पुग्दा गाउँमा चहलपहल बढिरहेको थियो । पसल र बजार खुलिसकेको थियो, स्थानीय बासिन्दाहरुले आफ्नो दैनिकी थालिसकेका थिए । टोलीले झापाको पुरानो सदरमुकाम झापा बजार पुगेपछि जिल्लाको अनुगमन टोलीले बजार क्षेत्रको सरसफाइ व्यवस्थापनबारे बुझ्न खोज्यो । “झापा बजारका बासिन्दा समेत नजिकै रहेको खोला र चिया बगानमा दिसा पिसाव गर्न जाने गरेको भेटियो” खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापाका सरसफाइ फोकल पर्सन रुद्रबहादुर न्यौपानेले भने, “जिल्लाको पुरानो सदरमुकाममा नै यो अवस्था भेटिनु दुःखद कुरा हो । अब अभियानलाई यस ठाउँमा केन्द्रित गरेर तोकिएको मितिमा जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्नैपर्छ ।”
मकै खेतीमा १० लाख लगानी गर्नेको घरमा पनि छैन चर्पी
झापा गाउँपालिका, वडा नं. ५ का रहमद अलीले मकै खेतीमा मात्र १० लाख लगानी गरेका छन् । उनको घरमा ट्याक्टर छ, समुदायकै सम्पन्न र अगुवामा पर्छन् । तर पनि उनको घरमा चर्पी छैन । “कसरी बनाउनु चर्पी ? चर्पी बनाउने पैसा नै छैन”, जिल्ला र गाउँपालिकाको संयुक्त अनुगमन टोलीसँग उनी बम्किए, “चर्पी बनाऊमात्र भनेर हुन्छ ? हामीसँग पैसा हुनु पर्दैन ?”
उनको झगडा सजिलै साम्य भएन । उनकै घरमा पुगेर चर्पी बनाउने ठाउँ देखाउँदा समेत विभिन्न बहाना झिके । “गाउँमा सरसफाइको अवस्था साँच्चीकै कमजोर रहेछ”, गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुन्ती बूढाथोकीले भनिन्, “हाम्रो वल पनि नपुगेको रहेछ गाउँमा ।”
जिल्लाको टोलीसँग झगडा गर्न थालेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले खुल्लामा दिसा गर्नु सामाजिक अपराध भएकोले अब खुल्लामा दिसा गर्न नपाइने र नियम नमाने सुरक्षाकर्मीले कारवाही गर्ने बताएपछि रहमद अली अलिक शान्त बने ।
“यस्ता अटेरीलाई चर्पी बनाउन लगाउने तपाईहरुको काम हो”, जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका समेत अध्यक्ष रहेका जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिए, “टोल बस्ती तहमा निगरानी समिति बनाएर अभियानको नेतृत्व गर्नुहोस्, तपाईहरुको गाउँपालिकाका कारण जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त हुनबाट रोकिनु हुँदैन ।”